Sales and Marketing Trainee | Job in Myanmar ﻿
•	လူမႈဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ရမည္။
•	ေစ ်းကြက္အတြင္း Marketing ဆင္းႏိုင္ရမည္။
•	စည္းကမ္းရွိၿပီး ရိုးသား၍သြက္လက္သူျဖစ္ရမည္။
•	အက ်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ရမည္။
•	တကၠသိုလ္တစ္ခုခု မွ ဘဲြ႔ ရျဖစ္ရမည္။
•	အသက္ ( ၂၀ - ၃၀ ) အတြင္း ။
•	အဂၤလိပ္စာ ေရး / ေျပာ ႏိုင္သူျဖစ္ ျပီး Work / Excel / Internet / E-mail/ Viber ေကာင္းမြန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
•	လစာေကာင္း + Bonus ေပးမည္။
•	Sein Gay Har Group ၏ company ခြဲ တစ္ခုျဖစ္ေသာ International Equal Trading Co., Ltd တြင္ လုပ္ကိုင္ ရမည္ျဖစ္သည္။
Company Industry: Sales and Marketing Trainee
•	Provide inspired leadership for the organization. •	Make important policy, planning, and strategy decisions. •	Develop, implement and review operational policies and procedures. •	Assist HR with recruiting when necessary. •	Help promoteacompany culture that encourages top performance and high morale. •	Oversee budgeting, reporting, planning, and auditing. •	Work with senior stakeholders. •	Ensure all legal and regulatory documents are filed and monitor compliance with laws and regulations. •	Work with the board of ...
The Brand Marketing Manager should possess the strategic ability to initiate, propose, advocate and take ownership for brand initiatives which can significantly impact and advance brand competitiveness. The Brand Marketing Manager must possessastrong understanding of the marketing mix elements of positioning, pricing, distribution, and promotion in order to increase and solidify brand equity. The Senior Brand Manager is responsible for analyzing and leveraging consumer insights in the formulation and execution of brand initiatives. she shoul ...
•	အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် လာရောက်ရောင်းချသော Company များအားနေရာချ ထားပေးခြင်း •	Center အတွင်းအရောင်းပွဲကြော်ငြာ Vinyl / စာရွက်များကပ်ခြင်း •	အပတ်စဉ်ကျင်းပသော Promotion စာရွက်များအား ပြင်ပသို့ထွက်၍ဝေခြင်း
•	ဦးဆောင်မှုကောင်းပြီးဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer နှင့် English က ျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။
•	Computer, Internet,Email ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အစိုးရရုံးကိစ္စများ ကျွမ်းကျင်သူ (အ၀င်/ထွက်) သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် •	အုပ်ချုပ်မှု၊ ငွေကြေး၊ ကုန်ပစ္စည်း၊ ၀န်ထမ်းရေးရာများတွင်
•	ဦးဆောင်မှုကောင်းပြီးဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer ၊ English က ျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။
Sales and Marketing Trainee Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Sein Gay Har Department Store Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Sales and Marketing Trainee Jobs in Myanmar, jobs in Yangon